#BIM - Koorsada Injineerinka Dhismaha iyadoo la adeegsanayo Revit - Geofumadas
Tilmaanta naqshada leh ee la socota Model Information Model loogu talagalay qaabeynta qaab-dhismeedka.
Ku sawir, naqshadee oo ku diiwaangalnow mashaariicdaada qaab-dhismeedka REVIT
Gali goobta naqshada oo leh BIM (Modeling Modeling Information)
Maskaxda ku hay aaladaha sawirka badan
Samee shaxooyin aad adigu iska leedahay
Dhoofinta barnaamijyada xisaabinta
Abuur oo qor qorsheyaal
Abuur oo falanqee culeyska iyo falcelinta qaabdhismeedka
U soo bandhig natiijooyinkaaga qorsheyaal tayo leh kala badh wakhtiga.
Koorsadan waxaad ku baran doontaa sida looga faa’ideysto aaladahaan si habka naqshadaynta qaabab dhismeyaasha ay u dhakhso badan, waxtar badan uguna tayo sarreeyso.
Hab cusub oo lagu maareeyo mashaariicdaada
Software Revit waa hogaamiyaha aduunka ee naqshadeynta naqshada iyadoo la adeegsanayo BIM (Dhisida Macluumaadka Dhisida Macluumaadka), u ogolaanaya xirfadleyda inaysan kaliya soo saarin qorshayaasha laakiin ay isku duubniyaan qaab dhismeedka oo dhan oo ay ku jiraan astaamaha nashqadeynta. Revit waxaa loogu talagalay in lagu daro qalabka naqshadeynta dhismayaasha.
Markaad xubno u xilsaarayso mashruuc, waxaad:
Si otomaatig ah u samee qorshooyinka sagxada, wiishka, qaybaha iyo aragtiyaha ugu dambeeya
Ku samee xisaabinta tiirarka daruuriga ah
Ku shaqee xisaabinta horumarsan barnaamijyada khaaska ah sida Falanqaynta Dhismaha Robot
Abuur qaabab qaab dhismeed iyo falanqeyn leh
Si dhakhso leh u abuur oo qor dukumenti faahfaahin ah
Kor u qaad waxqabadkaaga markii aad ka shaqeyneyso nooca BIM
Waxaan raaci doonnaa nidaamka caqligalka ah ee aad ku horumarin karto mashruuc shaqsiyeed. Halkii aan ka fiirsan lahayn dhinac kasta oo aragti ahaan u leh barnaamijka, waxaan diiradda saari doonnaa sidii aan u socon lahayn qulqulka shaqo ee ku habboon kiis dhab ah oo aan ku siin doono tilmaamo aad ku hesho natiijooyinka ugu wanaagsan.
Waxaad heli doontaa faylal kuu diyaarsan oo kuu oggolaanaya inaad raacdid horumarka koorsada oo aad u maleyneyso inay ugu badan tahay adoo kugu hagaya inaad istcimaasho qalabka adiga oo fiirsanaya fasallada.
Maaddada koorsada ayaa si joogto ah loo cusboonaysiiyaa si loogu daro cusboonaysiinno muhiim ah ama dhibco kaa caawin kara inaad horumariso waxbarashadaada oo aad u heli doontid iyaga waqtiga dhabta ah si aad u hagaajisid xirfadahaaga joogtada ah.
Samee nashqadaha qaab dhismeedka sida ugu waxtarka badan adiga oo adeegsanaya qalabka Revit ee loogu talagalay qaabeynta qaab-dhismeedka
U samee moodello qaab dhismeedka Revit
Abuur qorshooyinka qaab dhismeedka guud ahaan dhaqso iyo hufnaan
Abuur moodhalka falanqaynta ee qaabdhismeedka
Si loo fuliyo dhaqamada waxaa muhiim ah in barnaamijkan soo socda lagu rakibo PC-gaaga ama MAC: Revit 2015 ama ka sareeya
Koorsadan waxaa loogu talagalay aqoonyahannadaas la xiriira qaabeynta qaab-dhismeedka kuwaas oo raba inay horumariyaan tayadooda
Injineerada ka qeyb galaya geeddi-socodka dukumiintiyada mashruuca ugu dambeeya ee mashruuca ayaa waliba ka faa'iideysan kara koorsadan.
Maahan koorso mowduucyo fikradeed ah, laakiin waa koorso la taaban karo oo ku saabsan sida loo dabaqi karo aqoon hore loo soo helay oo ku saabsan qaabeynta qaab dhismeedka oo ay weheliso qalab u fududeeya shaqada injineerada iyo kuwa kale ee ku lug leh mashruuca.
Post Previous«Previous #GIS - Koorsada ArcGIS 10 - oo ah xoq
Post Next #GIS - Koorsada ArcGIS Advanced CourseNext »
2 Jawaabo "#BIM - Koorso Injineer Dhisme iyadoo la adeegsanayo Revit"
JEFFERSON VALENZUELA isagu wuxuu leeyahay: